Diyaar u ah Hogaanka Bold, Magacyada McKnight Tonya Allen oo ah Madaxweyne
McKnight wuxuu doortaa hal-abuure la aqoonsan yahay, wax-ku-ool, iyo dhise isbahaysi maadaama uu qaadanayo caqabadaha ugu waaweyn ee jiilkan
Hay'adda McKnight Foundation waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo in Tonya Allen ay hoggaanka u qaban doonto hay'adda madaxweynenimo, laga bilaabo Maarso 1, 2021. Allen wuxuu u yimid McKnight inuu yahay hoggaamiye caan ku ah samafalka, oo uu ugu dambeeyay madaxweyne iyo agaasimaha guud Hay'adda Skillman Foundation gudaha Detroit. Iyadoo loo diyaariyay cutubkeeda soo socda, Foundation waxay u aragtaa iyada inay si sax ah u tahay qofkii saxda ahaa ee hoggaanka qaban kara inta lagu jiro waqtigan taariikhiga ah. Intii lagu gudajiray masiibo caalami ah, xisaabinta jinsiyadaha qaranka, iyo dhibaatada cimilada, hoggaanka geesinimada leh iyo aragtida fog ee Allen ayaa dardargelin doona horumarka McKnight ee wax ka qabashada qarnigan dhibaatooyinka ugu adag uguna deg degsan.
"Tonya waa hoggaamiye firfircoon oo hal-abuur leh oo ku dhisaya xoogga taariikhda dheer ee McKnight, qiyamkiisa, iyo deeq-bixinta," ayuu yiri Noa Staryk, oo ah guddoomiyaha guddiga soo socda ee McKnight. "Daacadnimadeeda, quruxdeeda, iyo rikoorkeeda la caddeeyay, waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa Tonya oo ah hoggaamiye lagu kalsoon yahay, karti leh, saameyn leh oo himiladeenna horay u sii wadi doona." Staryk, oo ah jiilka afraad ee xubin ka ah qoyska muddo dheerna xubin ka ahaa guddiga, wuxuu ku guuleysan doonaa guddoomiyaha hadda ee Debby Landesman bisha Janaayo.
Allen waxay si dhow ula shaqeyn doontaa xubnaha guddiga McKnight iyo hoggaamiyeyaasha — oo madax ka noqon doona dhammaan haweenka, aqlabiyadda dadka midabbada leh ee hoggaanka sare - iyo sidoo kale shaqaale kala duwan oo qiyaastii gaaraya 50. Xulitaankeedu wuxuu daba socdaa raadinta qaran ee ballaaran ee guddiga raadinta aasaaska, oo ay hogaaminayeen xubnaha guddiga Erika L. Binger iyo Ted Staryk. Allen wuxuu badalay Kate Wolford, oo iska casilay xilka madaxweynenimo dabayaaqadii 2019 13 sano kadib. Lee Sheehy, oo ahaa agaasimihii hore ee barnaamijka aasaaska ee Gobolka & Bulshada, wuxuu sii wadi doonaa madaxweyne kumeelgaar ah illaa Allen uu bilaabo doorka bisha Maarso.
"Intii lagu gudajiray masiibo caalami ah, xisaabinta jinsiyadaha qaranka, iyo dhibaatada cimilada, hoggaanka geesinimada leh iyo aragtida fog ee Allen ayaa dardar gelin doona horumarka McKnight ee wax ka qabashada jiilkan dhibaatooyinka ugu adag uguna deg degsan."
U heellan suurtagalnimada iyo Awoodda Meesha
Xirfado isdaba joog ah oo soo jiitamayay in ka badan labaatan sano, Allen wuxuu diirada saaray samafalka bulshada ay hogaamiso wuxuuna aad u jeclaa awooda bedelka goobta. Adkeysi xeel dheer, waxay ka shaqeysay la shaqeynta bulshada iyo isu keenida qeybaha kala duwan si loo daboolo fursadaha iyo caqabadaha, waxayna u ololeysay siyaasado iyo dhaqammo loo siman yahay oo waxtar leh dhammaan dadka.
"Tonya waa diblomaasi aad u xushmad badan bulshada iyo dhise buundo oo hogaamiye u noqon doona dhamaan barnaamijyada iyo wada-hawlgalayaasha McKnight ee ku yaal Minnesota iyo adduunka oo dhan," ayuu yiri Debby Landesman. "Waxay ku fiicantahay is dhexgalka, adoo tijaabinaya habab cusub, iyo abaabulka dadka iyo bulshada xagga aragtida guud ee isbeddelka."
Allen wuxuu raadin karaa aaminsanaanteeda qiimaha adeega iyo samafalka ilaa ayeeydeed albaabkiisa hore. Ilmo yar oo ku koraya Detroit, Tonya waxay daawan doontaa sida ayeeyadeed, nafteeda u dhaqdhaqaaqe iyo abaabul xaafadeed, ugu soo dhaweyneyso kuwa ugu baahi badan gurigeeda.
“Qoysasku waxay u imaan jireen guriga ayeeyday saq dhexe sababtoo ah biyahoodii ayaa dhammaaday, ama kuleyl ma ay lahayn. Mar walbana albaabkeeda way furi jirtay, ”ayay tiri Allen. “Waxa aan ka soo qaatay waayahaas waa inaan dhammaanteen hibo u leenahay. Looma baahna in hadiyad naloo siiyo lacag ama dherer, laakiin kulligeen waxbaa nalagu deeqay. Wadaagista hadiyadaha naxariista iyo badhaadheynta ayaa si aan caadi aheyn u saameynaya. ”
Allen waxay ku biirtay The Skillman Foundation sanadii 2004, iyadoo ka bilawday agaasime barnaamij ka dibna kuxigeenka barnaamijyada ka hor intaanay helin jagada ugu saraysa ee sanadka 2013. Skillman, waxay uqorshaysay barnaamijka 10-ka sano ee $100 million ah ee Xaafadaha Wanaagsan waxayna ahayd xoog wade dhisida isbahaysi waxay keentay mid ka mid ah dib-u-habeyntii waxbarasho ee ugu hami badnayd taariikhda Detroit.
Ka hor Skillman, Allen wuxuu u adeegay sarkaal barnaamij u ahaa Charles Stewart Mott Foundation iyo Thompson Foundation. Waxay aasaastay Shabakadda Waalidiinta ee Detroit, oo ah urur xubin xubin waalid u ah hagaajinta xulashooyinka waxbarasho ee carruurta, waxayna hoggaamisay Hindisaha Dib-u-dhiska Bulshada ee Annie E. Casey Foundation.
"Daacadnimadeeda, quruxdeeda, iyo rikoorkeeda la caddeeyay, waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa Tonya oo ah hoggaamiye lagu kalsoon yahay, karti leh, saameyn leh oo himiladeenna horay u sii wadi doona." -NOA STARYK, KURSIGA GOLAHA WAKIILADA
Marka laga soo tago shaqadeeda Detroit, Allen waa hogaamiye xirfad iyo iskaashi ku leh masraxa qaranka. Waxay ka shaqeysaa dhowr guddiyada gobolka iyo qaranka. Iyadu waa gudoonka imanaya Golaha Aasaaska; waxay sidoo kale u adeegtaa guddoomiye guddiga sare ee jaamacadda Oakland, iyo la-guddoomiyeyaasha Isbahaysiga Fulinta ee Wiilasha & Ragga Midabka. Waxay heshay Abaalmarinta Nicholas P. Bollman shirkii sanadlaha ahaa ee Sanduuqa Funders Network 2017 ee ka dhacay St. Paul, Minnesota, iyo Taariikhda of Philanthropy ugu magac daray iyada oo ka mid ah Shan Hal-abuurayaal aan faa'iido doon ahayn oo ay daawadaan 2013.
Allen wuxuu haystaa shahaadada mastarka ee caafimaadka bulshada, shahaadada labaad ee shaqada bulshada, iyo shahaadada koowaad ee cilmiga bulshada, mid kasta wuxuu ka qaatay Jaamacadda Michigan-Ann Arbor. Waxay kasbatay wehelnimo machadka Aspen iyo machadka ganacsiga ee Mareykanka.
Allen waxay tiri waxay dareemeysaa inay soo jiidaneyso qiyamka, dadka, iyo balanqaadka samafalka ee Minnesota waxayna rajeyneysaa inay la degto gobolka. Waxay u heellan tahay qoyskeeda, oo ay ku jiraan ninkeeda, Louis, iyo saddex gabdhood, Phylicia, Brianna, iyo Alanna.
"Waxaan heysanaa fursad aan caadi aheyn oo aan uga wada shaqeyn karno garabkeena lamaanayaasha si aan u hormarino hogaan wadareed kaas oo dardar galin doona xawaaraha, baaxada, iyo cabirka saameynta." —TONYA ALLEN, MADAXWEYNAHA GALO
Kulankaan xilligan ka dhacaya McKnight
Go'aanka McKnight waa hal tallaabo oo dheeraad ah oo horay loogu qaaday isbeddel ku bilaabmay dib-u-eegis Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, iyo hadaf cusub oo lagu hormarinayo cadaalad, hal abuur, iyo mustaqbal aad u tiro badan oo ay dadku iyo meeraha ku noolyihiin. Baadigoobka madaxweynaha cusub, guddiga wuxuu raadiyay hogaamiye dhisi doona ballanqaadyada barnaamijka aasaasiga ah ee farshaxanka iyo bulshooyinka sinnaanta ee Minnesota, cimilada iyo tamar nadiif ah ee Midwest, cilmi baarista dalagyada caalamiga ah, iyo neerfaha; keena qoto dheer iyo garasho xagga sinaanta jinsiga iyo ka mid noqoshada; isla markaana u gudub aasaaska heerka saameynta ku xigta.
Kireynta Allen, McKnight wuxuu sii wadi doonaa inuu qaado ficil geesinimo leh si loo hormariyo xalalka cimilada ee Midwest, loo dhiso sinaan iyo loo dhan yahay Minnesota, iyo taageerida farshaxanka ee Minnesota, cilmi baarista dalagyada caalamiga ah, iyo neerfaha.
Waxay ka heleen hogaamiyahaas Tonya Allen. Waxay la wadaagaysaa aragtida McKnight ee ku saabsan suurtagalnimada iyo awoodda sadaqadda - awooddeeda ah inay dhaliso isbeddel, hal-abuurnimo, iyo ka faa'iideysiga dhammaan adeegsiga raasumaalka samafalka si loo horumariyo aagagga barnaamijkeeda. Waxaa loogu yeeraa inay dhisto mustaqbal waara, oo cadaalad ah Minnesota iyo wixii ka dambeeya, iyada oo la hubinayo in qof walbaa uu ku naaloonaayo. Haddii gobolkani horumar ka sameyn karo arrimahaas, ayay tiri, waxay tusaale u noqon doontaa dalka intiisa kale.
"Waan ku faraxsanahay inaan ku biiro Hay'adda McKnight Foundation." Ayuu yidhi Allen. “Waxaan dareemayaa in laygu yeeray xaruntan cajiibka ah iyo fursadaha iyo caqabadaha gaarka ah ee Minnesota. Waxaan heysanaa fursad aan caadi aheyn oo aan dhinac uga wada shaqeyn karno la-hawlgalayaashayada-dhaqdhaqaaqayaasha bulshada, maamulayaasha shirkadaha, hoggaamiyeyaasha nidaamka dadweynaha, iyo horyaallada aan macaash doonka ahayn-si loo hormariyo hoggaanka wadajirka ah ee dardar gelinaya xawaaraha, baaxadda, iyo cabirka saameynta. Aniga oo la kaashanaya asxaabteyda tayada leh, waxaan diyaar u ahay inaan ku xoojiyo awooda iyo hantida ugu weyn ee McKnight, isla markaana aan keeno isbadal nidaam oo u dhigma waxa ay u qaadaneyso dadka iyo meeraha inay ku noolaadaan. ”
Si aad wax badan uga ogaato Tonya Allen, akhri muuqaalkan.
Machadka McKnight Foundation, waa aasaas qoys oo reer Minnesota ah, wuxuu horumariyaa mustaqbal aad u cadaalad badan, hal abuur leh, iyo mustaqbal aad u tiro badan oo dadka iyo meerahu ku barwaaqoobaan Waxaa la aasaasay 1953, Machadka McKnight wuxuu si qoto dheer uga go'an yahay horumarinta xalalka cimilada ee Midwest, dhisida sinnaan iyo loo dhan yahay Minnesota, taageerida farshaxanka ee Minnesota, neerfaha, iyo cilmi baarista dalagyada caalamiga ah
Na Eng, Agaasimaha Isgaarsiinta
Wadaagista Awooda Tababar
By Arleta Little Janaayo 2021
McKnight Horumarka Hogaanka Cimilada ee Midwest